warkii.com » DAAWO: Koox Heerka Saddexaad Ah Oo Dhisanaysa Garoonka Ugu Quruxda Badan Dunida
DAAWO: Koox Heerka Saddexaad Ah Oo Dhisanaysa Garoonka Ugu Quruxda Badan Dunida
Waxa laga yaabaa inaad maqashay magaalada Marbella ee ku taalla gobolka Andalusia ee waddanka Spain. Buuraheeda 27 Kiiloo Mitir ah iyo xeebaheeda ku taxan badda Mideterranean-ka ee hotellada, dhismeyaasha iyo dabaqyada sida layaabka leh u dhisan ee qorraxdunam sida tooska ah ugu dhacayso. Dad badan ayaa dalxiis u taga, waqtiyada ay fasaxa yihiinna kusoo qaata, waxaana ugu badan dadka caanka ah ee lacagta haysta.
Laakiin waxa hubaal ah in dad badan aanay aqoon u lahayn kooxda ka dhisan magaaladaas ee Marbella FC oo horyaalka heerka saddexaad ee waddanka Spain ka ciyaarta, taas oo bilowday dhismaha garoonka ugu quruxda badan dunida.
Jimcihii ayay dunidu ku war heshay naqshadda garoonkan oo qaadi doona 18,000 qof marka la dhamaystiro, waxaana layaab noqotay qaabka uu dhismihiisu yahay iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay.
Garoonkan ayaa laga dhisayaa halka uu ku yaalla garoonka hadda ee kooxda Marbella FC ay ku ciyaarto ee Estadio de Marbella, kaas oo gebi ahaantiiba la burburin doono kaddibna laga binaynayo midka ay naqashaddiisu dunida ka wareerisay.
Garoonkan ayaa waxa lagu samayn doono barkado lagu dabbaasho, dukaamo waaweyn oo laga adeegto, hotelo la seexdo iyo makhaayado laga cunteeyo, kuwaas oo garoonkan ka dhigi doono mid ka duwan garoomada kale ee dunida ku yaalla.
Garoonkan ayaa lagu tilmaamay inuu bilow u yahay qorshaha kooxda ee sannadaha soo socdo, kaas oo ah inay doonayso inay lacag badan suuqa geliso oo ay ka mid noqoto naadiyada horyaalka heerka koowaad ee LaLiga.
Garoonkan ayaa kor usii qaadi doona dalxiiska Marbella, waxaanay la tartami doonaan jasiiradda Ibiza oo ka mid ah goobaha hoggaamiya dalxiiska Spain.
Halkan ka daawo garoonka: